‌မောင်ချိုလေးရဲ့ အကူအညီကြောင့် အလုပ်ကလေး တစ်ခု အဆင်ပြေ သွားကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Posts
သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသု ကတော့ ကလေးအရွယ် ကတည်းက ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား တွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ သူမမြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲ လျှောက်လှမ်းရင်း ပရိသတ်အားပေးရ ကျိုးနပ်စေဖို့ မကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့ ပညာတွေ ကို သင်ယူနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေမှာ လည်း ပိုင်ဖြိုးသုက မကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုမှာ တိုင်ပတ်နေတုန်း ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ အကူအညီ တစ်ခုကြောင့် အဆင်ပြေ ချောမွေ့သွားရကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“ဒေါ်သုလေးခမျာမှာလေ Oppo နဲ့တွေ့ရင်အထူးတဆန်း‌တွေချည်းပဲ 😬😬😬 Productအသစ်အတွက်ဘာခိုင်းတယ်မှတ်တုံး? သီချင်းဆိုခိုင်းတယ်ဗျာ…. 😅 သီချင်းဆိုတာမှ studioမှာအကျအနကြီးကိုအဆို‌တော်တွေလိုအသံသွင်းရတာ 😏 ဆိုရတာ‌တော့နှစ်ပိုဒ်ထဲပါ။ လူကကြောက်မကြောက် ဆိုတာတော့ လက်ဖျားခြေဖျားတွေကိုအေးနေတာပဲ 🥶 ဆိုနေတာကြောက်သံကြီးပါနေလို့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုလေးက မကြည့်ရက်လို့ ဝင်ကူညီအားပေး သင်ပြပေးရတယ် 😁 သူလေးပါလို့ မဟုတ်ရင်ဒေါ်သု တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေတိုင်ပတ်နေမယ် မသိဘူး…😬ပြောချင်တာကတော့ အသံတွေသွင်းသီချင်းဆို ထားရတယ်လို့။ မကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ထား ရတာဆိုတော့ ထွက်လာရင် မဆဲကြပါနဲ့လို့ 🥺🥺🥺” ဆိုပြီး ပြောပြလာ ပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ သူမကိုယ်တိုင် Brand Ambassador အဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ထား ရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာ အတွက် သီချင်းသွင်းတုန်း ညီမလေးချမ်းမြေ့မောင်ချိုကြောင့် အဆင်ပြေသွား ခဲ့ရကြောင်း ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့ ကြော်ငြာလေး ထွက်ရှိလာရင် အားပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
‌မောငျခြိုလေးရဲ့ အကူအညီကွောငျ့ အလုပျကလေး တဈခု အဆငျပွေ သှားကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု
သရုပျဆောငျ ပိုငျဖွိုးသု ကတော့ ကလေးအရှယျ ကတညျးက ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတျကား တှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သူ တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆရာဝနျ တဈယောကျ ဖွဈတဲ့ ပိုငျဖွိုးသုကတော့ သူမမွတျနိုးတဲ့ အနုပညာ လမျးကွောငျးပျေါမှာပဲ လြှောကျလှမျးရငျး ပရိသတျအားပေးရ ကြိုးနပျစဖေို့ မကုနျဆုံးနိုငျတဲ့ ပညာတှေ ကို သငျယူနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှော လညျး ပိုငျဖွိုးသုက မကြှမျးကငျြတဲ့ အလုပျတဈခုမှာ တိုငျပတျနတေုနျး ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုရဲ့ အကူအညီ တဈခုကွောငျ့ အဆငျပွေ ခြောမှသှေ့ားရကွောငျး အခုလိုပဲ ပွောပွလာပါတယျ။
“ဒျေါသုလေးခမြာမှာလေ Oppo နဲ့တှရေ့ငျအထူးတဆနျး‌တှခေညျြးပဲ 😬😬😬 Productအသဈအတှကျဘာခိုငျးတယျမှတျတုံး? သီခငျြးဆိုခိုငျးတယျဗြာ…. 😅 သီခငျြးဆိုတာမှ studioမှာအကအြနကွီးကိုအဆို‌တျောတှလေိုအသံသှငျးရတာ 😏 ဆိုရတာ‌တော့နှဈပိုဒျထဲပါ။ လူကကွောကျမကွောကျ ဆိုတာတော့ လကျဖြားခွဖြေားတှကေိုအေးနတောပဲ 🥶 ဆိုနတောကွောကျသံကွီးပါနလေို့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုလေးက မကွညျ့ရကျလို့ ဝငျကူညီအားပေး သငျပွပေးရတယျ 😁 သူလေးပါလို့ မဟုတျရငျဒျေါသု တဈယောကျ ဘယျလိုတှတေိုငျပတျနမေယျ မသိဘူး…😬ပွောခငျြတာကတော့ အသံတှသှေငျးသီခငျြးဆို ထားရတယျလို့။ မကြှမျးကငျြတဲ့ အလုပျကိုလုပျထား ရတာဆိုတော့ ထှကျလာရငျ မဆဲကွပါနဲ့လို့ 🥺🥺🥺” ဆိုပွီး ပွောပွလာ ပါတယျ။
ပိုငျဖွိုးသုကတော့ သူမကိုယျတိုငျ Brand Ambassador အဖွဈ တာဝနျယူ ဆောငျရှကျထား ရတဲ့ ကုနျပစ်စညျးကွျောငွာ အတှကျ သီခငျြးသှငျးတုနျး ညီမလေးခမျြးမွမေ့ောငျခြိုကွောငျ့ အဆငျပွသှေား ခဲ့ရကွောငျး ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ပိုငျဖွိုးသုရဲ့ ကွျောငွာလေး ထှကျရှိလာရငျ အားပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာ ပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။